WhatsApp Shaqooyinka Kooxaha Barashada Bariga Dhexe
Shaqooyinka WhatsApp Shaqooyinka
Shaqooyinka WhatsApp Shaqooyinka sida loo isticmaalo?
WhatsApp Kooxaha Shaqooyinka waxay kaa caawinayaan inaad hesho shaqooyinka banaan Dubai la Shirkadda Dubai City Kooxaha WhatsApp. Xaqiiq ahaan, dadka shaqo doonka ah ayaa hadda ku biiri kara shaqaalaheena WhatsApp mustaqbalkiisa kooxaha Dubai iyo Abu Dhabi. Xaaladahaas awgood, waad ku biiri kartaa kooxaheena waxaad ku noqon kartaa qurbo joog Dubay ama Abu Dhabi. Duulimaad kasta wuxuu hadda ku noqon karaa isticmaale ku faraxsan shaqaalahayaga shaqo doonka ah ee shaqaaleysanaya kooxaha Bariga Dhexe. Oo waxaad ka heli kartaa fursado shaqo oo cajiib ah gudaha Dubai City adoo adeegsanaya annaga Iskuxirka Kooxaha WhatsApp-ka gudaha Dubai. Marka ujeeddadan, shirkaddeennu waxay u abuurtay tiro aad u badan kooxo shaqooyinka Whatsapp ah shaqo doonka. Hadafkayagu waa inaan maareyno boggaga WhatsApp xirfadeed iyo adeegyada qoritaanka mobilada ee qurbaha. Xaqiiq ahaan wakiilada shaqaaleynta u dirista dalabka kooxahayada. Waxaanuna ku jirnaa rajo ah in isticmaaleyaasha warbaahinta mileteriga adeegsada ay u adeegsan doonaan kooxo si ay shaqo ugu helaan UAE. Raadinta shaqadu waa waqti qaadasho. Marka, si ay u fududaato in la bilaabo raadinta shaqo on our Dubai ama Abu Dhabi WhatsApp WhatsApp.
WhatsApp Xiriirrada Kooxaha
Kooxda WhatsApp Astaamaha isku xidhka casuumadu aad bay ugu fiican yihiin booqdayaasha App App. Shirkaddayadu waxay abuurtay kooxo isla markaana caawinta dadka kale si fudud adoo gujinaya xiriiriyeyaasha martiqaadka dhammaantoodna way isku xiri karaan. Sababtaas awgeed, shirkaddeenna ayaa dadka soo booqda u keena websaydhkeenna. Ujeeddo oo ah in la isku xiro midba midka kale. Maalmahan dadka isticmaalaya WhatsApp-ka waxay ku biiri karaan dhowr kooxood boggayaga shirkadda. Waqtigan xaadirka ah, qofna uma baahna wax farsamooyin IT ah. Maanta waad ku biiri kartaa kooxdeena. Maamulkayagu wuxuu awoodaa inuu kula xiriiro. Haddii aad jeceshahay inaad isticmaasho astaamo fadlan nala soo xiriir fadlan fadlan hubi Xaaladda WhatsApp. Xaaladahaas oo kale, haddii aad raadineyso saaxiibo cusub Whats App waa inaad akhridaa maqaalkeena. Tan iyo markii Sheekada WhatsApp waxay leedahay Daabacay muuqaalkan cajiibka ah ee qof walba. Taas bedelkeeda, WhatsApp waxay noqotaa isbeddel cusub oo lagu helo dadka kale. Tusaale ahaan, waad u maarayn kartaa si xirfad leh. Ama dhinaca kale, kaliya si fudud uga hel saaxiibo cusub khadka tooska ah. Ka dib oo dhan, dad badani waxay bilaabeen raadinta WhatsApp Groups Link Online. Kadib muddo kadib WhatsApp for android kaliya noqo fikirka woqooyi !. Waxaad ku casuumi kartaa dadka a Kooxda WhatsApp Kaga wada sheekeyso isku xirka aan bixinno !. Si kastaba ha noqotee, waxaan bilaabeynaa inaan helno marti-sharaf badan oo caalami ah oo ka timaadda kooxdeena. Oo muhiim ah in la garto waa dad aad u xiiseeya kuwaas oo kaliya raadinaya ku soo biirista kooxo badan oo WhatsApp ah Linkedin iyo sidoo kale Facebook. Dhanka togan, waxaan qoreynaa maqaal waxay la xiriirtaa WhatsApp Isku xirnaanta qof walba. Xaqiiqdii, waxaan ka hadli doonaa qaar ka mid ah xulashooyinka wada sheekaysiga ee wanaagsan ee WhatsApp ee aad isticmaali karto. Iyadoo tan la adeegsanayo, maanka, waxaan si hubaal ah uga wada hadli doonnaa Facebook iyo iskuxirka kooxda 'Linkedin Group'.
WhatsApp Shaqooyinka Kooxaha ee Dubai
Qodob kale oo muhiim ah ee noo Whatsapp Dubai Xannaano iyo Shaqaaleynta Dubai adeegga suuqgeynta shaqsiyeed. Taas oo aan isticmaaleyno WhatsApp adeegyada suuqgeynta internetka. Ugu horreyntii, in la diro farriimo loona caawiyo ugaadhsiga shaqo raadinta sidii ay ku heli lahaayeen kuwa mushaharka qaata Xirfadda Dubai Magaalada. Falanqaynta ugu dambeysa qiimaha isticmaalkayaga WhatsApp premium Shaqooyinka adeegga Dubai. Waa bilaash. Adeeggan waxaa si weyn loogu abuuray qurbejoogta caalamiga ah. Qoraalka caalamiga ah ee qoraalka iyo raadinta shaqada ee Bariga Dhexe. Marka la soo koobo waxaad ku dhajin kartaa CV-gaaga iyo lambarka taleefankaaga. Waqtigan xaadirka ah, waxaan sameynay our Wacitaanka WhatsApp kooxda qoritaanka mobilada oo aad u caan ah Facebook iyo LinkedIn. Dhanka kale, waxaan rajo ku qabnaa inaad raacdid shirkadeena. Sababtoo ah caawinta xirfad raadinta kale iyo gaar ahaan sidayadayada Dubai Whatsapp adeega kooxda wada hadalka. Hubaal ayaa ka caawin kara dadka kale in lagu meeleeyo UAE. Adeeggayaga wuxuu kaa caawinayaa inaad u dirto farriimaha codka ee Madaxa. Sidoo kale la wadaagida waayo aragnimadaada shaqo. Ujeedada dib-u-dejinta Dubai si loogu noolaado qaab nololeed.
Ku bilow bogga Whatsapp Group Chat
Waxaan dhawaanahan abuurnay kooxo dhowr ah. Sidaas ayaad ku biiri kartaa wakhti kasta oo aad rabto inaga Kooxda isgaadhsiinta WhatsApp. Dhinaca taban, badiyaa sheekaysiga Whatsapp-ka inta badan hore ayaa loo qaatay. Sababta oo ah WhatsApp kooxo xaddidan. Arintaas, dadka raadinaya xiriirada iskuxirka casuumada WhatsApp Group ee dadkoo dhan. Sida aan u sheegnay dhinaca taban, inta badan kooxaha aad ka heli doontaa badankood way buuxaan. Tusaale ahaan, xiriirada qaarkood uma fiicna adeegsadayaasha sababta oo ah ma awoodi doontid inaad isticmaasho oo aad ugu biirto la hadalka dadka kale. Sababtaas awgeed, shirkaddayada ayaa go'aansatay inay ku siiso fursad. Ugu dambeyntiina ku biir WhatsApp Group isku xirka aruurinta. Kooxaheena WhatsApp-ka ayaa ah kuwa aad u xiiso badan meel loogu talagalay dadka isticmaala khadka tooska ah. Gaar ahaan haddii aad jeceshahay inaad koox ku darto degelkeena. Sidookale hadaad jeceshahay inaad lahadasho dadka kale. Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa caawino sidii aad ula socon lahayd dhammaan asxaabtaada iyo qoyskaaga. Fikradda ka dambaysa xidhiidhkayaga aan ku leenahay WhatsApp waa inay kaa caawiso sidii aad dadka kale ula xidhiidhi lahayd. Waxaad xitaa la hadli kartaa dadka aad ku jeclaatay kooxaha WhatsApp gudaheeda. Waad xiriiri kartaa qofkasta oo katirsan qoyskaaga. Abuur kooxo saaxiibo ah oo u dir shirkaddayada. Kadib la xiriir ama Xubnaha Xubnaha oo farriin u dir shirkaddeena. Isku day inaad ka dhigto mid rasmi ah inay yeeshaan kooxdooda shakhsiyadeed ee warbaahinta bulshada. Xaaladdaas oo kale, waa inaad booqataa kooxaheenna oo aad aragtaa waxa ka socda kuwayaga wada-sheekaysanaya ee WhatsApp-ka ah. Waxaad ku biiri kartaa kooxo badan si aad ula sii joogtid kuwa kale. Bilow inaad ku mashquulto dadka kale saaxiibbada WhatsApp maalintii oo dhan ama laga yaabee inay jiri doonaan sabab kale.
Hel saaxiibada WhatsApp
Xaaladahaas oo kale, shirkaddayada cajiibka ah waxay ku siin doonaan koox weyn oo WhatsApp ah. Gaar ahaan kuwa jeclaan lahaa casuumadaha kuwa kale inay bilaabaan xiriirada kuwa kale. Tusaale ahaan, haddii aad jeceshahay inaad ku biirto xiriirin badan oo WhatsApp ah waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino inaad baxdo. Haddii aad ka mid tahay telefoonka gacanta adeegsadayaasha. Waxaad u diyaar garoobi kartaa inaad booqato meelahayaga ugu wanaagsan ee internetka si aad ula sheekaysato. Sababtaas awgeed, maqaalkan ayaa waxaa lagu fuliyay kumanaan WhatsApp Groups Link. Waxaad ku biiri kartaa kooxaha aad rabto WhatsApp oo kaliya hal guji adigoo u maraya muujinta xiriiriyeyaasha soo dhoweynta. Shirkaddeenu waxay si adag ugu shaqaysaa wadaagista kormeera WhatsApp Liiska iskuxirka kooxda weyn. Iyo sida la ogsoon yahay in dhammaan isticmaaleyaasha taleefanka gacantu ay jeclaan doonaan soo ururintaan. Sababtoo ah waad wada xiriiri kartaan. Shirkadeena, waa shaqo adag, sababtoo ah waqti badan ayey qaadatay. Kaliya si loo abuuro kooxo WhatsApp ah qof walba. Intaa waxaa dheer, gelitaanka dhammaanba hal mar waxay naga dhigeysaa shaqo adag si aan uga soo aruurinno kooxo cusub internetka. Kooxdayadu waxay kooxda ka abuurtay ilo kala duwan. Isticmaalayaal badan oo cusub ayaa ka raadiya shabakadda 'WhatsApp Group Invite Links' internetka maalin kasta. Waxaad xitaa la hadli kartaa dadka aad ku jeclaatay kooxaha WhatsApp gudaheeda. Waad xiriiri kartaa qofkasta oo katirsan qoyskaaga. Abuur kooxo saaxiibo ah oo u dir shirkaddayada. Kadib la xiriir ama Xubnaha Xubnaha oo farriin u dir shirkaddeena. Isku day inaad ka dhigto mid rasmi ah inay yeeshaan kooxdooda shakhsiyadeed ee warbaahinta bulshada. Xaaladda jirta, wixii aan soo arkay, kuwa jecel WhatsApp waxay jecel yihiin inay ku biiraan Kooxo badan si ay maalin walba mashquul ula ahaadaan ama waxaa laga yaabaa inay jirto sabab kale. Fikradda ka dambaysa xidhiidhkayaga aan ku leenahay WhatsApp waa inay kaa caawiso sidii aad dadka kale ula xidhiidhi lahayd.
Kooxda WhatsApp ku biir kooxda
Kooxaha WhatsApp-ka oo ay la socdaan Shirkadda Magaalada Dubai - Shirkadeena hadda waxay ka caawineysaa dadka inay bilaabaan WhatsApp group chat chat inay ku biiraan Bariga Dhexe. Xaqiiq ahaan, waad isticmaali kartaa telifoonka gacantu. Iyo lahadalka kooxahayada WhatsApp si ay saaxiib cusub ula yeeshaan qof. Duulimaad kastaa wuxuu heli karaa shaqo uu jeclaan doono. Waad u adeegsan kartaa adeegeena si aad u muujiso Xirfadahaada xirfadeed ee United Arab Emirates. Codsigan taleefanka gacantu wuxuu noqdaa mid lagu qiimeeyay adduunka oo dhan. Ku sheekaysiga WhatsApp waa mid ka mid ah kuwa ugu sareeya xagga ganacsi bulshada. Beddelka adduunku sidoo kale waa mid muhiim u ah sida casriyeynta teknolojiyadda loogu talagalay meeraheena. Markaan maskaxda ku heysan, waxaan go'aansanay inaan wax yar kaa caawino. Oo tallaabo qaado si aad horay ugu socoto iyadoo fursadda IT ah. Kooxaha WhatsApp Shaqooyinka waa kuwa loogu talagalay dadka leh xirfado wanaagsan.
Ku soo biir kooxda ugu fiican ee adduunka
Waxyaabo aad u xiiso leh Whatsapp. Taas oo aad awoodid xirfad ku raadso WhatsApp ka badan Linkedin. Waxaa intaa dheer haddii aad mid ka mid ah ugu fiican ee IT. Waxaa jira dhowr fursadood oo cajiib ah. Waqtigan xaadirka ah, xitaa waad awoodi kartaa Raadinta Xirfadda IT ee Harvard. Codsigan waxaa badanaaba abuuray mid ka mid ah dadka ugu caansan adduunka. Sidaas darteed waa inaad tixgelisaa Whatsapp sida ilaha wanaagsan ee sheekada kuxiran ee Dubai. Sidaas darteed haddii aad raadineysid kooxaha WhatsApp. Waa inaad la xiriirtaa dhowr dadka Jaamacadda Harvard. Waxaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan sidii loo meeleyn lahaa WhatsApp Community. Shirkadda ayaa si dhaqso badan u koraysa Facebook iyo Linkedin lafteeda.
Harvard dib u eegista WhatsApp Markers
Dib u eegista Harvard ayaa ku qoran waxa ku saabsan suuqyadu waxay u baahan yihiin inay wax ka ogaadaan codsiyada chatka ee Whatsapp. Shaqaalaha Whatsapp-ka ah maareeyayaasha ugufiican ee hagaajinta isgaarsiinta waaritaanka ee barnaamijkaas cajiibka ah ee taleefanka. Si kale haddii loo dhigo, Harvard wuxuu dadka ka caawiyaa sidii ay u caawin lahaayeen blog isgaarsiinta oo looga wada hadlo horumarinta WhatsApp mustaqbalka. Xaqiiqdii waxaad ka heli kartaa faa'iidooyin iyo xiriir toos ah. Inta u dhaxaysa Harvard iyo WhatsApp. Intaas waxaa sii dheer, shirkadan oo adduunka ka dhigaysa mid furfuran oo iskuxiran. The Harvard maareeya cilmi baaris ku saabsan Codsiga WhatsApp. Sidaas darteed waa inaad ku raaxaysataa helitaanka macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Harvard iyo WhatsApp. Markaa shaki la'aan, haddii mid ka mid ah dugsiyada ugu fiican iyo dhimista xarumaha. Wuxuu dhiirigeliyaa WhatsApp ardayda. Waa inaad isku daydaa Qaado Suuqa Maxkamada.
U fiirso kooxo badan oo WhatsApp ah
Ku soo biir WhatsApp Maanta !. WhatsApp wali wey kobcaysaa maalin kasta. Codsiyada wareega ayaa maalin walba caan ah. Shirkadani waa dhakhso marka loo eego isku xirnaanta. Waxaad talo fudud ka heli kartaa shaqaalaysiintooda. Soo hel shaqo shaqo mushahar leh iyo il dakhli lagu kalsoonaan karo. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay abuurtay habab cusub oo lagula hadlo qof kasta oo jooga meerahan. Dabcan inaadan wax lacag ah ku dallaacin. Tan iyo markii dalabka uu howl bilaabay. In kabadan 1 bilyan oo isticmaaleyaasha guriga ah ayaa bilaabaya inay isku xiraan midba midka kale. Whatsapp hadda wuxuu ka shaqeeyaa in kabadan dalal 180. Waa aalad caan ka ah qorista Asiya iyo Bariga Dhexe. Shaqaaleysiinta maamulayaasha isticmaalaya WhatsApp-ka si ay ula xiriiraan musharraxiintooda. Sababta oo ah waa wax fudud oo wax ku ool ah. Tusaale ahaan, waad hubin kartaa xitaa haddii qoraayaasha ama musharraxiinta ay firfircoon yihiin. Iyo dhinaca togan markii ay shaqaynayeen markii ugu dambeysay. WhatsApp waad u istcimaali kartaa waajibaadka nolol maalmeedkaaga sida lahadalka asxaabta iyo qoyska. Laakiin waxaan si aad ah ulaxiriiraynaa raadinta xiriiro toos ah oo cusub markasta iyo meelkastaba.
WhatsApp loogu talagalay dadka isticmaala chat
Codsiga WhatsApp ma aha oo keliya lacag la'aan qof kasta oo telefoonka gacanta. Laakiin codsigan taleefanka gacanta wuxuu si fiican u shaqeeyaa qalab kasta oo mobile ah ee waddan kasta. Shirkadan, ma jirto wax xiriir ah oo dhexdhexaad ah. Sababtoo ah boqolkiiba boqol ayaa bilaash u ah isticmaale kasta. Shirkadda samaysa waxay u sahlanaan kartaa qof caalami ah. Ons Whatsapp, waxaad xitaa abuuri kartaa koox lagu kalsoonaan karo. La xidhiidh dadka kale meel kasta oo aad joogto. Shirkadda shaqo doonka ayaa abuuray fursado yar. Halka shaqaaleeyaha shaqo-ku-darsaduhu way fududaan karaan oo sugi karaan boostada raacaan koox xirfadeed. Laakiin dadku had iyo jeer waxay raadinayaan inay wadaagaan xigashooyinka ay jecel yihiin. Gunaanad, waxaad u soo diri kartaa macluumaad muhiim ah boggooda internetka. Ama xitaa la qabsado shaqaale qoris. Oo si fudud u dir dalabkaaga si aad shaqo uga hesho dadka WhatsApp. Marka fadlan la xiriir kooxda shaqa qorista. Dhanka kale fadlan la wadaag CV-gaaga. Meel aad ka timid ma jirto. Waxaad ka heli kartaa fursad xiriir bilaash ah oo cajaa'ib leh oo leh WhatsApp.
Kooxdayadu waxay soo ururisay waxyaabo badan oo WhatsApp Group Links ah. Halkaasoo dad badani ay isla markiiba ku biiri karaan. Guud ahaan ka hadalka qaybaha kala duwan ee adduunka oo dhan. Intaa waxaa sii dheer, dhammaantood waxaan ku wadaagno qodobkayaga. Waxa kale oo aad la wadaagi kartaa xiriiriyahaaga 'WhatsApp Group link'. Ku dar kooxdaada Whatsapp-ka websaydhka shirkadda. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad aaddo aniga oo ah abuuraha WhatsApp oo aan ku daro kooxdeyda 'WhatsApp'. Qeybtanna, waxaan ku dari doonaa kooxdaada boggayaga xiga. Ujeedadayadu waa in aan helno kooxo badan oo aan ku darno iskuxirka kooxda ku soo ururinta kooxdeena. Waxaanna aaminsanahay inay tahay fikirka ugufiican uguna raaxada badan weligiis. Sida laga soo xigtay kooxaha kobcinta ee LinkedIn. Isticmaalayaashayadu way jecel yihiin dhammaantoodna taleefan ayey ku sii daraan kooxaha. Taasi waa sababta ay aqristeyaasheena u jecel yihiin ku soo biirista ururintayada mar labaad iyo mar labaad warbaahinta bulshada. Waqti fog, dadka cusub waxay jecel yihiin inay ku biiraan koox cusub. Iyo wada sheekaysiga midba midka kale. Kumaa garanaya inaad jeceshahay inaad sidoo kale diyaar u ahaatid inaad dadka kale kula kulantaan khadka tooska ah. Si kastaba ha noqotee, hadaadan ka mid ahayn. Isku day inaad naftaada waxyar ka sii badan oo nala soo xiriir. Tusaale ahaan, Haddii aadan hubin halka aad ugu biireyso barnaamij cusub oo adeegsada iyo aqristaha Whatsapp. Ha walwelin waxaan kaa caawin doonnaa. Waxaan kuu diyaarinay fariin WhatsApp-ka ah oo kuu diyaar ah waxaanan rajeyneyaa in sidaas la qabatimo. Shirkaddayadu waxay kuu dammaanad qaadi kartaa, inaad jeclaan doonto tan la yaab leh ee xoogga leh ururinta kooxaha wada sheekaysiga. Qof walbana wuu ku biiri karaa waqti kasta. Adiga oo aan khasaarin waqtigaaga qaaliga ah, u oggolow inuu yimaado boggayaga qaybta ugu weyn ee boggan. ANI hel kubado ordaya.
Booqo cusub Shaqooyinka Dubai Kooxaha
Soo hel a shaqo riyadeed Magaalada Dubia oo ay la jirto Shirkadda Magaalada Dubai. Dhab ahaantii dhawr bilood ka dib, mid ka mid ah kuwa shaqo doonka ah oo ka yimid India ayaa shaqo cajiib ah ka helay Dubai City. Kadib shirkadayadu waxay bilaabeysaa inay horumariso kooxo cusub oo WhatsApp ah gudaha UAE. Wixii intaa ka dambeeyay, waxaan u samaynay kooxo WhatsApp ah wakaaladaha caalamiga ah. Waxaan kor u qaadnay wacyigelinta Bariga Dhexe Cunto ganacsi yaryar iyo xirfadaha bogagga WhatsApp. Meeshaad ka heli karto adeegyada shaqaalaysiinta mobilada ee Wadamada Khaliijka. Isla mar ahaantaasna rajada laga qabo in shaqaalaheenna raadinta mileteriga raadinta ay u adeegsadaan qaabab sax ah. Marka maxaad sameyn laheyd ?. U dir Nambarka taleefonka kooxdeena, adoo ku gaabin kara jid waad ku dari kartaa booska aad raadineyso inaad hesho. Qaado dhammaanaga shaqo raadin Si dhakhso leh uga hawl - gal adigoo la hadla dadka kale. Intaa waxaa dheer, isku day inaad muujiso jiritaankaaga meelaynta UAE. Isla tusaalahan, uma baahn doontid inaad kubixiso saacado badan maalin walba raadinta shaqooyinka cusub ee Dubai. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa kaliya inaad daawato kooxaha Shaqooyinka WhatsApp. Iyo inaad shaqo cusub ka hesho UAE adoo soo celinaya. Shirkadayada iskudayaysa inay ka dhigto shaqooyinkaaga Dubai raadinta walaac yar iyadoo kaa caawineysa inaad dadka kale la xiriirto.
Kordhiyo Jawaabta 50% Ku qor taleefannada Dukaamada Dubai
Waxaad u baahan doontaa inaad taleefankaaga mobilada ugu dirto WhatsApp Group oo ku yaal Dubai iyo Abu Dhabi. Mar dhow ama hadhow lambarkaaga guur-guura wuxuu noqdaa mid faayras ah iyada oo loo marayo ololeyaasha warbaahinta bulshada iyo kooxaha shaqaaleynta ee Gacanka iyo UAE Dhinaca wanaagsan, mid kasta oo ka mid ah adeegsadayaasha kooxdeena ayaa saddex-jibaarmay dariiqa shaqooyinka xiisaha leh. Si fudud, adoo adeegsanaya nidaamkayaga wada hadalka ee WhatsApp. Gaar ahaan haddii aad raadinayso jagooyinka Bariga Dhexe. Xaaladdan oo kale, heerka jawaab celinta ee shaqaaleeyuhu wuxuu u kordhayaa 50%. Tusaale ahaan, ma jirto hab aad ku waayi karto oo aad ku waayi karto shaqa-qorista shirkadaha ee UAE. Hadaad isticmaaleyso Kooxaheena WhatsApp-ka ee UAE. Sidookale, ha ilaawin inaad Geliyaan resumeygaaga kooxo badan oo xirfado ah. Waxaad ku dhejin kartaa faylka PDF ama waxaad xitaa samayn kartaa sawir sawir ah oo ku saabsan CV-gaaga kuna soo dheji kartaa WhatsApp Chat. U oggolow dadka qoraayadu inay ogaadaan inaad raadineyso inaad u guurto Bariga Dhexe. Kooxdayada shaqooyinka, waxaad ka raadin kartaa Gacanka iyo Bariga Dhexe.
Raadi shaqo Dubai sida aad rabto inaad u hesho!
Sababtan awgeed, waxaanu si joogta ah u horumarinaa kooxda cusub ee WhatsApp ee Dubai. Isla mar ahaantaana, hadafkeenu waa inaan gaarno shaqaaleeyayaasha gacanta oo kadibna kuula xiriiri doona. Hal wax ka badan oo qiimo leh oo aad waqti ku qaadato markaad shaqo raadineyso. Nidaamkayagu waa 100% lacag la'aan ah qof kasta oo shaqo doon ah. Iyo mid ka mid ah doorashooyinka ugu wanaagsan ee loogu tartamayo musharaxiinta caalamiga ah ee doonaya inay u dhoofaan Bariga Dhexe. Isku day inaad la hadasho a xubin ka mid ah kooxaha qorista Ayaa kaa qaadi doona nidaamka shaqo raadinta ee WhatsApp Dhinaca kale, ee tartanka adduunka ee 2018-2019 taleefan gacmeed shaqaaleysiinta shaqaalaynta gacanka. Xaqiiqdii, waxaad ubaahantahay inaad xawaareyso oo aad toos ula xiriirto shaqaaleeyaha. Nidaamkayaga, waxaad la xiriiri kartaa shaqo-qorista iyo shaqabixiyaha tooska ah. Xitaa waad la hadli kartaa kharashyada kale waxaadna waydiin kartaa sida loo helo a Shaqada UAE. Dhamaan farsamooyinka cusubi waxay hubaal ka helayaan qaar ka mid ah macluumaad qiimo leh oo ka socda shaqaalahaaga mustaqbalka.
Sidee kartaa WhatsApp Chat ku caawin kara?
E Baro mobilada iyo warbaahinta bulshada ee horumarsan shaqaalaynta xeeladaha iyo xeeladaha loogu talagalay Shaqada Dubai.
Kordhinta qorista qorista ilaa 87% heerarka jawaabta ee ku jira UAE.
U isticmaal fariin qoraal ah shaqaale qorista, waraysiyo ballan ah iyo noqo guddi aan daahin shaqooyinka Dubai.
Kala xiriirka kale dadka ajnebiga ah oo kala hadla xiriirka xirfadeed ee Gulf.
Shirkadda Dubai City oo hadda bixisa talooyin wanaagsan oo loogu talagalay Shaqooyinka magaalada Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda ka heli kartaa hagitaanno, talooyin iyo shaqaalaynta United Arab Emirates oo leh luqaddaada.